Beesha Caalamka ayaa sheegtay in hal dhinac keliya aanu qaadan karin go’aan lagu kordhinayo… – Hagaag.com
Beesha Caalamka ayaa sheegtay in hal dhinac keliya aanu qaadan karin go’aan lagu kordhinayo…
Posted on 15 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Beesha Caalamka ayaa soo saartay wax u eg digniin iyo cannaan kulul oo ka dhan ah Dowladda Federaalka, Baarlamaanka iyo Dowlad Goboleedyada.
Beesha Caalamka ayaa qoraal ku sheegtay, haddii Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Maamul Goboleedyada ka qaybgelin shirka Dhuusamareeb ay wiiqi doonto kalsoonida aan cagaha badan ku taagnayn ee saaxiibada caalamka ee Somalia.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Haddii cid ka mida madaxda ka qaybgeli weydo shirweynaha soo socda waxay baabi’in doontaa kalsoonida weli jilicsan, waxayna wiiqi doontaa geedi-socodka iyo is faham dhisidda, isla-markaana waxay hoos u dhigi doontaa inuu kulanka awood u yeesho in lagu gaaro go’aamo la hirgelin karo, iyadoo seddax bilood oo keliya ka harsan tahay taariikhda bisha November ee la qorsheeyay inay dhacaan Doorashooyinka Federaalka ee sanadka 2020 iyo iyadoo afar bilood oo keliya ka dhiman tahay inta aanu dhammaan muddo xileedka Baarlamaanka Federaalka 10aad.”
“Waxaan adkeyneynaa sidaan horeyba ugu sheegnay baaqyadeenii hore iyo wadahadalada hadda socda, ee aan la leenahay dhammaan Danleyda Siyaasadda in qaab doorasho kasta oo si khasab ah loo meel mariyo ama uu u meel mariyo hal dhinac oo keliya dhinacyada siyaasadda amaba qaar yaroo ka mida danleyda, iyadoo aan ogolaansho laga helin dhammaan dhinacyada aanu yeelan doonin sharciyad, dalkana aan laga hirgelin karin.”
“Waxaan adkeyneynaa inuusan hal dhinac oo keliya oo uu ku jiro Baarlamaanka uusan qaadanin go’aan keligii ah, oo uu ku kordhinayo muddo xileedka Baarlamaanka 10aad ama Laanta Fulinta ee Federaalka.”
Beesha Caalamka ayaa waxay u muuqataa mid si weyn kaga biyo diidan in la fashiliyo Shirka Dhuusamareeb 3 iyo in loo gogol xaaro muddo kororsi, ay sameyso Villa Somalia.